कोरोना नेगेटिभ आएपछि मन्त्री र सांसद ढुक्क – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । १० जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:३४ मा प्रकाशित
कर्णाली प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरुको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा पहिला मन्त्री, सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । बिहीवार स्वाब संकलंन गरिएका सबै एकसय ६५ जनाकै रिपोर्ट नै नेगेटिभ आएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आइतवारबाट सुरु हुँदैछ । संसद बंठक बस्नुअघि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री, सभामुख राजबहादुर शाही, सांसद, संसद सचिवालयका कर्मचारी र मर्यादापालकहरुको कोरोना परीक्षण गरिएको हो । शुक्रवार सबै जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै मन्त्री र सांसदहरु ढुक्क बनेका हुन् ।
उनीहरु सबैको सुर्खेतमै पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो । ‘सबै मन्त्री र सांसदहरुको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ, अब उहाँहरु ढुक्कले संसद बैठकमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ’ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको प्रयोगशालाका संयोजक ओम आचार्यले भने, ‘यो स्वाब संकलन गर्दासम्म उहाँहरु कोरोनामुक्त हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण हो ।’
रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै अब संसद बैठक बस्न पनि सहज भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले अब संसद बैठक ढुक्क भएर संचालन हुने बाटो खुलेको बताए । रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि सांसदहरुले पनि आफूहरु ढुक्क भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अलपत्र नागरिकको उद्दार र राहतमा खट्दा संक्रमणको आशंका रहेको भन्दै उनीहरुले परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आफूहरु ढुक्क भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनमा सहभागी हुने मन्त्री, सांसद, मर्यादापालक, सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र चालकसहित एकसय ६५ जनाको नमूना परीक्षण गरिएको थियो । प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनमा सहभागीहरुले मास्क र पञ्जा अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ । यस्तै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट देखाएर मात्र बैठकमा प्रवेश दिइनेछ । कोरोना त्रासका कारण यसअघि दर्शकका लागि व्यवस्था गरिएको स्थानसम्मै सांसदहरु बस्नेगरी सामाजिक दुरी कायम गरिएको छ ।
बाँकेका २१ जनाले जिते कोरोना
बाँकेका २१ जनाले कोरोनालाई पराजित गरी घर फर्किएका छन् । सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, खजुराको आइसोलेशनमा उचाररत २१ जनाको तेस्रो पटकको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरी उनीहरुलाई घर पठाइएको भेरी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले बताए । यससँगै हालसम्म कोरोनालाई जितेर घर फर्कनेको संख्या ७० पुगेको छ ।
यसअघि विभिन्न जिल्लाबाट ४९ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् उनीहरुलाई कोरोना विशेष आइसोलेशन अस्पताल र भेरी अस्पतालका चिकित्सकले फूलमाला र खादा ओढाएर शुक्रबार अस्पतालबाट बिदाइ गरेको उनले बताए । नेपालगन्जमा पहिलो पटक फेला परेका कोरोना संक्रमित ६० वर्षीय पुरुष पनि डिस्चार्ज भई घर फर्किएका छन् । उनीसहित नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८, जोलाहनपुर्वाका २० जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् ।
उक्त अस्पतालमा नेपालगन्जका २५ जनाको उपचाररत थिए । बाँकीको समय नपुगेकोले केही दिनपछि कोरोना परीक्षण गरी डिस्चार्ज गरिने उनले बताए । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको डा. थापाले बताए । नेपालगन्जमा पहिलो पटक वैशाख १९ गते ६० वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । भने, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको आधारमा स्वाब परीक्षण गर्दा २३ वैशाखमा एकैसाथ २२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
कोरोना संक्रमितलाई सुर्खेत ल्याईयो
कर्णालीको पहिलो कोरोना संक्रमितलाई उपचारका लागि सुर्खेत ल्याइएको छ । दैलेखबाट उनलाई शुक्रवार सुर्खेत ल्याएर कालागाउँस्थित प्रदेश अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालमा राखिएको छ । प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले उनलाई विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको बताए ।
दैलेखको आठबीस नगरपालिका वडा नम्बर १ का ३५ वर्षीय ती व्यक्तिमा सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनलाई दैलेख सदरमुकामस्थित सरस्वती माविमा राखिएको थियो । उनलाई चारदिन दैलेख राखेर सुर्खेत पठाइएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका खोप अधिकृत थीरप्रशाद रेग्मीले बताए ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीका तीन जिल्लामा कोरोना अस्पताल घोषणा गरेको भए पनि कोरोना अस्पतालमा लगेर उपचार नगरिएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको थियो । भारतको वनवासा हुँदै दैलेख पुगेका उनलाई आठबिस नगरपालिकाले गत चैत्र ३१ गते उद्दार गरी ल्याएको थियो । उनीसँगै ३९ जनाको उद्धार गरिएकोमा ३८ जनामा कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ ।